Warshaa sukkaaraa Fincaawaa balaan ibiddaa mudate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Warshaa sukkaaraa Fincaawaa balaan ibiddaa mudate
Warshaa sukkaaraa Fincaawaa balaan ibiddaa mudate
Balaan ibiddaa kaleessa Warshaa Sukkaaraa Finca’aa mudate guutumaan guutuutti dhaamuu himame.
Ibiddichi kutaa oomisha itti guban irraa madduusaa Daayireektarri Koominikeeshinii Korporeeshinii Sukkaaraa Itiyoophiyaa Obbo Zamdkun Taklee himaniiru.
Ibiddicha dhaamsuu kan carraaqaa turan hojjattoonni warshichaa keessaa namni du’e jiraachuu baatanis kan madaa’an akka jiran gabaafameera.
Balaa kanaan kutaan oomishaa gurguddoo warshichaarra midhaan irra hinqaqqabne.
Ibiddicha hatattamaan too’achuuf xiyyaarri faayidaarra akka oole himameera.
Ka’usi ibidichaa beekamuu baatus rakkoonsaa sakkattaa’amaa jira; akka dubbatamutti hawaasa naannawaarraa ibidda tatamsa’e ta’uu danda’a jedhameera.
balaa ibiddaa WS fincaawaa
warshaa shukkaaraa fincaawaa
Previous articleTanzania deports 71 Ethiopian migrants
Next articleSelale Dairy Cooperative Union enters dairy-processing business in Ethiopia